Ethereum အဲဒါဘာလဲ၊ အီ ၀ ယ်ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။ အားလုံး blockchain အကြောင်းကို | Gadget သတင်း
Etherum သည် Bitcoin ကိုယ်နှိုက်အတွက်ရိုးရှင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ blockchain နည်းပညာ၏အားသာချက်ကိုယူသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အခြားနည်းလမ်းငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုကမ်းလှမ်းရန်သာမက (Bitcoin အသုံးပြုသော) Bitcoin ဆင်တူသည်, Ether သို့သော်၎င်းသည် blockchain ဟုလူသိများသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်များကိုမျှဝေသည့် cryptocurrency စနစ်များကိုဖန်တီးရာတွင်ကူညီသည့် software development platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသောမှတ်တမ်းများကိုအချိန်မရွေး ပြင်ဆင်၍ မရနိုင်ပါ။
သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သောအရာကိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်သိရန်ဖြစ်သည် Ethereum သည် Bitcon အတွက်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါကအဖြေမရှိပါ။ Ethereum ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသော Bitcoin ၏အခြားရွေးချယ်စရာကို Ether ဟုခေါ်သည်။ Ethereum စီမံကိန်းအပြင်အခြားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်သိရန်ဖြစ်သည်။ Ethereum ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ.
သင် Ethereum ကိုယခုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်, \_ t ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်ယူမှုအတွက် $ 10 အခမဲ့ရယူပါ
1 ethereum ကဘာလဲ?
3 Ethereum ကိုဘယ်သူဖန်တီးခဲ့တာလဲ။
4 Bitcoin မှအခြားရွေးချယ်စရာ
5 Ethereum ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
6 blockchain ဆိုတာဘာလဲ။
8 cryptocurrency ပူဖောင်းရှိပါသလား?
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Ethereum သည် Bitcoin ကဲ့သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြစ်သော Ether ကိုပေါင်းစပ်သည့်စီမံကိန်းဖြစ်သည် blockchain ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောဖြစ်နိုင်ခြေ၏အားသာချက်ကိုယူ, Ethereum မွေးဖွားကတည်းကစမတ်ကန်ထရိုက်များဖန်တီးရန်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးတစ် ဦး မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှင့်။ စမတ်စာချုပ်များတွင်ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဘဏ္operationာရေးဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုများပါဝင်သည်။ သူတို့သည်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်ပရိုဂရမ်းမင်းကုဒ်များနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် သူတို့ကိုပြုလျှင်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါကသင်သည်ဤအရာကိုအခြားဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြုလုပ်ရမည်
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ETH ၀ ယ်ယူရန် $ 10 အခမဲ့ရယူပါ
ဤအချက်အလက်အားလုံးကို blockchain တွင်ထင်ဟပ်သည်။ အားလုံးစစ်ဆင်ရေးထင်ဟပ်နေကြသည်ရှိရာ unalterable စံချိန်အကြွေစေ့များရောင်းရန်ဖြစ်စေ ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ smart contract များ…ပလက်ဖောင်း၏ blockchain တွင်သိမ်းထားသောအချက်အလက်များသည်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်ပြီး Ethereum ကွန်ယက်ကိုဖွဲ့စည်းထားသောကွန်ပျူတာအားလုံးတွင်ရနိုင်သည်။ Bitcoins blockchain ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းဤနည်းပညာမှပေးသောဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတိုးချဲ့ခြင်းမရှိသေးသဖြင့်ငွေပေးငွေယူအချက်အလက်များကိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
Ethereum ပလက်ဖောင်းသည်ငွေကြေးကိုယ်နှိုက်မဟုတ်ပါ။ The အီသာသည် Ethereum ပလက်ဖောင်း၏ငွေကြေးဖြစ်သည်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်လူများကိုငွေပေးချေနိုင်သည်။ အီတာသည် Bitcoins နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်စတင်ခဲ့သည့်စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် cryptocurrencies ၏အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်နောက်တစ်ခုနှင့်မတူသည်မှာ blockchain ဟုလူသိများသော blockchains ၏အားသာချက်ကိုအပြည့်အဝရယူသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအတွင်းတွင်ပါဝင်သည်။
ရုံ Bitcoin ကဲ့သို့အီ မည်သည့်ဘဏ္bodyာရေးအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်မပေးပါ, ဒါကြောင့်၎င်း၏တန်ဖိုးသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းစတော့ရှယ်ယာ, အိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်ငွေကြေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်မဟုတ်။ Ether ၏တန်ဖိုးကိုထိုအချိန်တွင်ရှိသည့် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများအရပွင့်လင်းသောစျေးကွက်တွင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
အလိုရှိ သင်၏ EtH ၀ ယ်လျှင် ၁၀ ဒေါ်လာအခမဲ့ဖြစ်သည်? ကောင်းပြီ ဒီမှာနှိပ်ပါ
Bitcoins အရေအတွက်သည် ၂၁ သန်းသာကန့်သတ်ထားသော်လည်း၊ Ether သည်အကန့်အသတ်မရှိသောကြောင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းသည် Bitcoins ထက် ၁၀ ဆပိုမိုနိမ့်သည်။ Ethereum မစတင်ခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သောကြိုတင်ရောင်းချမှုကာလအတွင်းစီမံကိန်းအတွင်းရှိ Kickstarter ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်ပံ့ပိုးပေးသူအားလုံးနှင့် Ethereum ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် Ether ၇၂ သန်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ပို၍ အရေးကြီးသောအခြားအရာများကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အဖိုးတန်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ကြိုတင်ရောင်းချမှုကာလအတွင်းရေးဆွဲခဲ့သောစည်းကမ်းချက်များအရ Ether ကိုတစ်နှစ်လျှင် ၁၈ သန်းအထိထုတ်ပေးသည်။
Bitcoins နှင့်မတူဘဲ Ethereum ကိုဖန်တီးသူသည်ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်ရှိပြီးဖုံးကွယ်မထားပါ။ Vitalik Buterin သည် Ethereum ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ၂၀၁၄ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် Vitalik သည်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းကျော်ရရှိပြီးပြည်သူ့ဘဏ္financingာငွေကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ Ethereum စီမံကိန်းကိုအာရုံမပြုမီ၊ Vitalik သည် Bitcoins အကြောင်းဘလော့ဂ်များတွင်ရေးသားခဲ့သည်။ Bitcoin ကိုအသုံးပြုသောနည်းပညာကသူ့အားကမ်းလှမ်းနိုင်ပြီးထိုအခိုက်အတန့်မတိုင်မီအထိရွေးချယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများကိုသူစတင်တီထွင်ခဲ့သည်။
လတ်တလောဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနန္တတန်ခိုးရှင် Bitcoin အားအခြားနည်းလမ်းများစွာရှာတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤအရေအတွက်သည်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ အီ Litecoin နှင့်အသုံးပြုသူများအများဆုံးအသုံးပြုသည့်အခြားနည်းလမ်းအဖြစ် Ripple။ Ether ၏အောင်မြင်မှုများစွာသည်နောက်ကွယ်ရှိ Ethereum စီမံကိန်း၏ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာဖြစ်ပါက cryptocurrencies ဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏လေးပုံတစ်ပုံကိုကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Bitcoin သည်ကုန်သွယ်မှု၏ ၅၀% နီးပါးရှိသောဘုရင်ဖြစ်သည်။
နောက်ရှင်းပြပါမည် Ethereum ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ဒါမှမဟုတ်အစား, cryptocurrency ၏နာမဖြစ်သော Ethers ဝယ်ဖို့ဘယ်လို။
အီတာ၏ဖန်တီးမှုတွင်အပြည့်အဝပါဝင်နိုင်ရရန်, Bitcoin ထံမှတိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့မှာအားကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်လိုအပ်သောဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်ပါတယ် ၎င်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအမျိုးအစားကိုစတင်ရရှိနိုင်သည်။ Bitcoin သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ လျှောက်လွှာနှင့်စျေးကွက်တွင်တွေ့နိုင်သောအမျိုးမျိုးသောလမ်းဆုံလမ်းခွများသည်စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေကြပြီးယခုအချိန်တွင် Ethereum အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မပြောနိုင်ပါ။
ငါတို့သည်လည်းအစာရှောင်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်နိုင်သည်နှင့် Ethereum ကိုဝယ်ပါ Coinbase ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ဤငွေကြေးကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ cryptocurrencies ကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည့်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ethereum ၏ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Ether နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သောမှတ်တမ်းများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို blockchain အကြောင်းပြောရန်လိုအပ်သည်။ Bitcoins အသုံးပြုသော protocol တူညီသည် ဒါပေမယ့်အရာမှသူတို့ကလုံခြုံရေးကမ်းလှမ်းတဲ့အများကြီးပိုအရေးကြီးသော utility ကိုပေးပြီ။
Blockchain သည် cryptocurrencies နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသော registry တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို cryptocurrency တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနား registry ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီမှတ်တမ်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြင်ဆင်၍ မရပါ လူတိုင်းကြည့်နိုင်အောင်လူတိုင်းကကြည့်လို့ရတယ်။ blockchain မှပေးထားသောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများမှအကာအကွယ်သည်၎င်းတို့အားစမတ်စာချုပ်များချုပ်ဆိုရာတွင်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သည်။
Ethereum ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုသင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပါတယ် အကယ်၍ စာဖြင့်ရေးသားထားသောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီပါက၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပါက၎င်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည် တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ဆက်သွားစရာမလိုဘဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမည့်အခြေအနေများအတွက်အေးဂျင့်အားနှစ်ဖက်စလုံးမှတည်ထောင်ထားသည့်ရင်းမြစ်များမှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သည်အပ်နှံစာချုပ်များနှင့်အခြားဖောက်သည်များနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်ဤစာချုပ်အမျိုးအစားကိုကျင့်သုံးရန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်တွင်အာမခံအစုစုတစ်ခုရှိကြောင်းမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်လုံခြုံရေးတစ်ခု၏ဈေးနှုန်းသည် X ပုံအတိုင်းသို့ရောက်ရှိပါက၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက်ရောင်းသောအခြေအနေမျိုးကိုသင်ထူထောင်ထားသည်။ Ethereum စမတ်စာချုပ်နှင့်အတူ ဘယ်သူမှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ မည်သည့်အချိန်တွင်သူသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိသောအခါရှယ်ယာများရောင်းချရန်ဆက်လက်ရောင်းချရန်မည်သည့်အချိန်တွင်စျေးနှုန်းကိုသတိမပြုသင့်ပါ။
အရာရာတိုင်းဟာလှပပြီးလှပပေမယ့်လည်းဒီစာချုပ်အမျိုးအစားကိုပြုပြင်လို့မရဘူးဆိုတာမှတ်ထားရမယ်၊ သင်ခွင့်ပြုသည့်အခြေအနေတစ်ခုသတ်မှတ်ထားလျှင်သင်ဖျက်သိမ်းနိုင်မှသာ။ ငါ blockchain မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့ငါအချိန်မရွေးတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မရနိုငျသောစံချိန်ဖြစ်သောကြောင့်, သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုလည်းပြုပြင်လို့မရပါဘူး။
အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများနည်းတူ cryptocurrencies သည်၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထက်များစွာမြင့်တက်စေသောပူဖောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ cryptocurrencies ၏အမှု၌, ဖြစ်နိုင်သောပူဖောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကကတည်းကအခြားပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများထက်အများကြီးပိုရှုပ်ထွေးတာဝန်ဖြစ်ပါတယ် က cryptocurrency ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့နေရာအဖြစ်တစ်ခုခု၏စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်။ Ether တစ်ခု၏တန်ဖိုးသည် ၀ ယ်လိုအားနှင့် ၀ ယ်လိုအားနိမ့်ကျသောနိူင်ငံများမှ Ethers များကို ၀ ယ်လေလေ၊ စျေးနှုန်းတက်လေလေ၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်လေလေဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းအပေါ်ထင်ကြေး။ Ether သည် Bitcoin ထက်ပိုမိုသောအားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ပမာဏသည်ယူနစ် ၂၁ သန်းသာကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းနှစ်စဉ်အီသန်း ၁၈ သန်းဖြန့်ချိခြင်းကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာပူဖောင်းကိုတကယ်ရင်ဆိုင်နေရလားမခံရဆိုတာကိုသိဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ တချို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကစဉ်းစားကြပါတယ် နှစ် ၅-၁၀ အတွင်းအီတာ၏စျေးနှုန်းသည်လက်ရှိစျေးနှုန်းထက်အဆ ၁၀၀ ထက်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည် အရာကနေဆဲမြင့်မားသောအထက်သို့ခရီးရှိကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မယ်။
Ethereum ကမင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဒီ cryptocurrency ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီမှာသင်အီသာဝယ်နိုင်သည်။ နင့်ကိုအားမပေးသေးဘူးလား Ethereum ကိုဝယ်ပါ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နည်းပညာ » Ethereum အဲဒါဘာလဲ၊ အီ ၀ ယ်ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ။
Ethereum! ငါ့ရဲ့လုံခြုံစိတ်ချရသူတွေကိုကြိုက်သလိုဒါမှမဟုတ် cryptocurrency ဂေဟစနစ်ကိုပိုပြီး projection လုပ်တာကဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ
ကျွန်ုပ်သည် ETHs ကိုဝယ်ပြီးပါပြီ
Francisco က Villarreal Guijo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ် Ethereum ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ် အနည်းဆုံးဘယ်လောက်မြှုပ်နှံရမလဲ၊ ငါဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ။
အက်ဖ် Villarreal နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
Francisco Villarreal Guijo အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ် Ethereum ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ် ethereum ၀ ယ်ရန်အနည်းဆုံးပမာဏနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နည်း။
Google Assistant ကသီချင်းတွေကို Shazam လို့သတ်မှတ်တယ်